You are at:Home»Ngoma Nehosho»Tuku chibaba: Mahachi
By Abel Ndooka on	 December 21, 2017 · Ngoma Nehosho
MUIMBI wemusambo wechitendero – Tatenda Mahachi – anoti akadzidza zvakawanda zvikuru kusanganisira kuzvininipisa nekutsungirira kubva kuna Oliver Mtukudzi apo vakashanda vese pakambo kake kanonzi “Ndisiye Satan”.
Kambo aka kari kunetsa zvikuru pamasai-sai akasiyana uye kaita kuti zita raMahachi risimukire mumhanzi sezvakaitika gore rapera apo akanetsa nekamwe kanonzi “Usacheme”.
“Mudhara Oliver Mtukudzi ndibaba vangu uye kushanda navo unodzidza zvakawanda, wega uchisvika pavari unotonzwa kuti ndiri kusangana nababa. Ndakadzidza kuzvininipisa pamwe nekutsungirira pane zvaunenge uchiita kubva kwavari. Takasevenza tese pakambo kangu uye ndinoshuvira kuti ndicharamba ndichishanda navo zvakare nekuti zita rangu riri kusimukira,” anodaro Mahachi.
“Ini ndiri muimbi akasununguka, ndinobvuma kudzidza uye nekushanda nevamwe vaimbi saka hapana chinonditadzisa kushanda navo zvakanaka, zvakasununguka,” anodaro.
Nguva ichangodarika, muimbi uyu akatunzvaidzwa nekupihwa mubairo weGospel Music Creative Market Penetration Leadership Excellence Acumen nebhodhi reZimbabwe Business Awards.
Izvi zvinotevera kushanda kwaakaita mukusimudzira mhanzi yake muZimbabwe nekunze kwenyika.
“Ndinonzwa kuzvininipisa kurangarirwa nemabasa angu andiri kuita, mubairo uyu unorakidza kuti basa rangu riri kubata vakawanda. Handisi kumira kuparidza shoko raMwari uye ndicharamba ndichibika mhanzi yemhando yepamusoro,” anodaro Mahachi.